दुर्योधनले श्रीकृष्णलाई युद्ध हार्नुको कारण के बताएका थिए ?
काठमाडौं । महाभारतसँग जोडिएका कैयौं कथाहरु प्रचलित रहेका छन् । महाभारतमा भीमले दुर्योधनलाई पराजित गरेपछि दुर्योधन जमीनमा लड्दै तीन औंला देखाएर केही बोल्ने प्रयास गरेका थिए । दुर्योधन एकदमै घायल भएका थिए । जसकारण राम्रोसँग बोल्न सकेका थिएनन् । यो देखेर श्रीकृष्ण उसको नजिक गएर वार्ता गर्न लागे । दुर्योधनले तीन गल्ती गरेर युद्धमा पराजित भएको बताए ।
१. मैले स्वयं नारायण अर्थात तपाइलाई नभई तपाईको नारायणी सेनालाई छान्नु ।
२. जब मलाई माता गान्धारीले नग्न अवस्थामा बोलाइन् तब म कम्मरमुनी पात लपेट्दै गएँ । यदि म नग्न अवस्थामा गएको भए मेरो पूरा शरीर वज्रको समान हुने थियो ।
३. मेरो अन्तिम गल्ती भनेको म युद्धमा सबैभन्दा अन्त्यमा अगाडी आएँ । यदि म युद्धको सुरुवातमा अगाडी आएको भए कौरवका वंश नाश हुनेथिएन ।